Maxay la gaar tahay Swizerland? | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Maxay la gaar tahay Swizerland?
Maxay la gaar tahay Swizerland?
Posted by: Mahad Mohamed 20 days ago
Himilo – Qulqulka webiyada, harooyinka iyo abid-cagaaranta dabiiciga ah–halkani waa Swizarland: dalka ugu quruxda badan Yurub. Waa dal ay ku midoobeen umad kala afaf iyo Iimaan ah. Waana dalka kaliya ee looga hadlo afar afood oo rasmi ah kuwaas oo kala ah German, French, Italian and Rumantsch. Kani waa wadanka qof uu xilli kasta u dalxiisi tegi karo kuna soo damaashaadi karo.
1. Dagaal taariikheedyada — Swizerland waa dalka aan dagaal ka dhicin taniyo qarnigii 16aad: 1505. Wuxuu caan ku yahay siyaasadda fara-galin la’aanta. Wuxuu mar walba ku haraa dhex-dhexaadinta kuwa dirira. Tani waxay dalkan ka dhigtay mid had iyo jeer xasiloon.
2. Laan-qeyrta Cas — Guddiga Caalamiga ah ee Laan-qeyrta Cas waxaa lagu aasaasay Geneva sanadkii 1863-dii. Waxaana lagu aasaasay fikrad uu lahaa wadani Swiz ah oo lagu magacaabo Henry Dunant.
3. Goor-sheegtooyinka — Saacadaha ama goor-sheegtada waa nuuc kamid ah wax soo saarka ay Swizerland ku faanto. Waxaa ku yaalla warshado ku dhow lix boqol oo sameeya saacadaha oo kaliya. Waana wadanka ugu saacado-sameys qurxoon.
4. Shukulaatada — Swizerland waxaa kale oo ay caan ku tahay shukulaatada. Waana wadanka soo saara shukulaatada ugu dhadhanka macaan dunida–taas oo laga sameeyo caano iyo kareem.
5. Harooyin — Swizerland waxaa ku yaalla harooyin waaweyn iyo kuwo yaryar kuwaas oo qurux la ceegaaga iyaga oo soo jiita indhaha dalxiisayaal badan oo soo booqda Swizerland.
Previous: Kai Havertz oo mustaqbalkiisa u caddeeyay kooxdiisa Jarmalka